७ कम्पनीको ३ करोड ५९ लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकृत, कुनको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > ७ कम्पनीको ३ करोड ५९ लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकृत, कुनको कति ?
७ कम्पनीको ३ करोड ५९ लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजार सुधारोन्मुख देखिएको छ । यसैक्रममा गत साता मात्र बजारमा ३ करोड ५९ लाख ७ हजार ९७ कित्ता शेयर पाइएको छ ।
यो साता सेयर बजारमा ७ वटा कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीको हकप्रद र बाँकी कम्पनीको बोसन सेयर सूचिकृत भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ ।
जस अनुसार एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २४ लाख ३० हजार ९३ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको हो । त्यसका साथै बाँकी अन्य ६ कम्पनीको बोनस शेयर सुचिकृत भएको नेप्सेल जनाएको छ । त्यसरी वोनस शेयर सुचिकृत हुेनमा ३ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विसका बैंक र एउटा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
जसमध्ये सिद्धार्थ बैंकको ९० लाख १ हजार ६२६ कित्ता, नबिल बैंकको १ करोड ८ लाख ५६ हजार ५२० कित्ता, लक्ष्मी बैंकको ८९ लाख २० हजार ५०८ कित्ता, ज्योती विकास बैंकको ३९ लाख ५२ हजार ५४९ कित्ता शेयर सुचिकृत रहेका छन् ।
त्यसका साथसाथै कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकको ५ लाख ३१ हजार ३०० र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २ लाख १४ हजार ५०० कित्ता बोनस शेयर सुचिकृत भएकोे छ ।
दुई दिन शेयर बजार बन्द हुने
यसैविच, लगातार सार्वजनिक बिदा परेपछि दुई दिन शेयर बजार बन्द हुने भएको छ । (फागुन २५गते आज) आइतवार अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवस र सोमवार फागु पुर्णिमा परेकाले यो साता तीन कारोबार दिनमात्र शेयर कारोबार हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले बताएको छ । अव नेप्सेमा मंगलवारदेखि मात्रै शेयर कारोबार हुनेछ ।
२०७६ फागुुण २५ गते १३:२९ मा प्रकाशित
नुन तथा चिनीको अभाव छैन : साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन
स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओको बाँडफाँड सोमबार हुने, के होला ?
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले गर्यो लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
बागलुङका सांसद र नेता एक्कासी किन पुगे प्रचण्ड निवासमा ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा लाभांश परिमार्जन सम्वन्धी यस्तो आयो सूचना